USOMABHIZINISI USUKUNYISWE WUSIZI LWABAKHUBAZEKILE - Ilanga News
Home Izindaba USOMABHIZINISI USUKUNYISWE WUSIZI LWABAKHUBAZEKILE
USOMABHIZINISI USUKUNYISWE WUSIZI LWABAKHUBAZEKILE
UMNU Bahle Zondo ongusomabhizinisi waseMsinga osungule isikole saba-phila nokukhubazeka eMsinga, othisha ubakhokhela ngephakethe lakhe.
USIZI lokubona abantwana basemakhaya abakhubazekile bevale-lwa ngabazali ezindlini bodwa, abanye baze bakhulekwe ngesisinga kuhle kwemfuyo ewuhlupho, kushaye kwezwela kusomabhizinisi waseMsinga, wasungula isikole sabantwana abakhubazekile. UMnu Bahle Zondo wodumo lokuthenga amabhanoyi amane wakha iBZ Centre for Disabled endaweni yasemakhaya eLenge, eMsinga. Ekhuluma neILANGA uMnu Zondo, uthe kumanje lesi sikole sinabafundi abawu-72 nothisha abawu-12, abaneziqu, ubakhokhela ephaketheni lakhe.
“Kulesi sikole kufundwa kakhulu umsebenzi wezandla bese kuba khona nabanakekeli njengoba abanye babafundi bengakwazi ukuzenzela, befunzwa futhi besizwa uma kufanele bayozikhulula. “Okwangenza ngenza lesi sikole wusizi engangilubona lubhekana nabazali, befuna izikole ezinganakelela abantwana babo bengazitholi. “IsiZulu sithi abantwana bomuntu bahlukaniselana inyoni, okusho ukuthi noma kungabukeka kukuncane kangakanani onakho, kodwa kungamsiza umuntu ongenalutho nhlobo. Ngazama ukukhuma nesikole esifunda abantwana abaphile saka ukuba sisiboleke amagumbi okufundisa, nempela basisiza.
Manje isibalo sabafundi bethu sesikhule kakhulu, yingakho sakha isikole sabo esizoba namagumbi awu-6 okufundela,” kusho uMnu Zondo. Uthi yize laba bantwana bekhubazekile ngokomzimba nangokomqondo, kodwa banekhono eliyisimanga uma kwenziwa umsebenzi wezandla. “Ngiyafisa ngelinye ilanga sithole uxhaso kuhumeni noma yikosomabhizinisi njengoba ziziningi izinto ezidingwa ngabantwana, okubalwa imoto ethutha abafundi. Ngifisa kusizwe nalaba asebengaphezulu kweminyaka ewu-16 ubudala, batholele imisebenzi ngoba isikole sethu sigcina kwabaneneminyaka ewu-16,” kusho uMnu Zondo.
Previous articleUkhuthaza iqiniso kubazali ona-102
Next articleKubi kozidubule ethola eyobuhlobo nengoduso